FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA CAVA-LON - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika cava-lon
Alika avy amin'ny Mpanjaka Charles Spaniel / Papillon Alika mifangaro
Mickey the Cava-lon eo amin'ny roa taona eo ho eo, milanja 14 pounds - 'Nanaraka taranja 3 izahay tamin'ny mpampiofana iray ao an-toerana, anisan'izany ny' Good Neighbor. ' Izy koa dia mampiofana alika 'namana'. Mampiasa ny ' fanamafisana tsara 'fomba fampiofanana. Avy eo izahay dia nianatra momba ny The Dog Whisperer ary nanomboka nampiasa ny fomba fanaony. Avy eo nisy olona nilaza taminay ny momba ny mpampiofana iray eto an-toerana izay mampianatra ny fomban'i Cesar ka lasa niaraka tamin'ny mpanazatra manokana izahay. Mickey (izay tiako holazaina dia izaho sy ny vadiko) dia nandia fiofanana nandritra ny herintaona mahery, ary mazava ho azy, tsy nifarana izany. Tena tia vola izy tamin'ny voalohany. Amin'ny maha alika mpamonjy anay dia tsy fantatray ny niaviany tamin'ny taona voalohany niainany. Na dia tsy nanaikitra na iza na iza aza izy dia nipaoka tampoka nefa faly ary nahazo orona kely vitsivitsy tamin'ireo ankizy mpifanolo-bodirindrina aminy. Nianatra izahay (avy tamin'i Cesar) hampianatra ny ankizy hitazona an'i Mickey ho tony, hitazona ny tavany hiala aminy, ary ho mpitarika entana! Nampianatra ny ankizy izahay mba hilaza amin'i Mickey hipetraka, hijanona, ho avy ary tian'izy ireo izany! Ary toy izany koa i Mickey! Ary izany dia manakana azy ireo tsy hamihina azy, izay mahaliana azy ary mametraka ny tarehin'izy ireo eo akaikin'ny nifiny. Anjarantsika no nampiofana ny ankizy! Ankehitriny izy rehetra dia tia azy ary tiany ny manao fampisehoana rehefa milalao miaraka aminy. '
Ny Cava-lon dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Mpanjaka Charles Spaniel, Cavalier ary ny lolo . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
IDCR = Fisoratana anarana amin'ny Canine®= Cavallon
Mickey ilay Cava-lon mivoaka rollerblading miaraka amin'ity tompona ity - 'Mandehandeha maraina izahay alohan'ny hiasana, avy hatrany aorian'ny fiasana, aorian'ny sakafo hariva, ary miara-mivoaka aminy eo am-baravarana any an-tokotany izahay alohan'ny hatory mba hahazoana antoka fa' mandeha izy. Mivoaka ao an-tokotaninay ao anaty fefy izy mba hanenjika ny aretin-trondro sy ny bunnies araka izay itiavany azy rehefa ao an-trano izahay. Ny olana lehibe indrindra eto amintsika dia ny fientanentanana sy ny fitoniana mafy. Izany no tanjonay, ny mianatra ny fomba hahatonga azy ho milamina mandritra ny diany, na ny fomba hitazomana azy tsy hitombo. Antsika io fa tsy Mickey! Nandeha tsara! Azontsika atao ny mampahafantatra azy amin'ny alika hafa ankehitriny (izay olana lehibe taloha) raha tsy nivily na nanaikitra! Ny fitaovana ampiasainay mahomby indrindra dia ny mandeha eo aminy, mijoro mahitsy eo alohany ary manohana azy (raha miondrika amina alika hafa mandeha izy). Izany no mahatonga azy hijery ambony ME ary hijanona tsy hijery ilay alika hafa. Manamafy izany fa izaho no mpitarika ny entana, mampiakatra azy amin'ny toerana ipetrahana izy ary mijanona tsy mivovo. Tsy mila miteny na kely aza aho. Fa ny ataoko fotsiny rehefa mahazo voanjo izy dia nanaiky ny ankamaroan'ny alika hafa mandalo. Ny ratsy indrindra dia raha misy jogger na bisikileta miakatra haingana avy ao aoriantsika. Raha henoko ny fahatongavan'izy ireo dia mijanona aho ary avadiko izy mba tsy hahagaga azy, dia salama tsara izy. '
Mickey the Cava-lon— 'Amin'ny ankapobeny, alika kely tsara izy! Ny vadiko mihazona sy mamihina azy, ary miakanjo azy amin'ny Halloween (manome ahy fijery izy rehefa mametraka akanjo azy manao hoe, 'Ampio aho?'). Tsy namelako azy teo am-pofoako mihitsy izy na naka azy (ary TSY MISY miakatra amin'ny fandriantsika mihitsy izy!). Saingy tia mandry amin'ny tany eo ambonin'ny tongotro izy ary mitsako ny tehiny rawhide na saribakoly (tsy misy famenoana). Mipetraka amin'ny tany aho ary milalao miaraka aminy sy ny amboahaolo (saribakoly tsy misy famenoana) isaky ny alina, fantatro fa mila fiheverana izy rehefa avy irery irery nandritra ny andro niasantsika. '
Mickey the Cava-lon eo amin'ny 2 taona eo ho eo
Aki the Cava-lon amin'ny maha alika azy amin'ny 5 herinandro. Ny reniny dia Papillon ary ny rainy dia Mpanjaka Cavalier Charles Spaniel.
Aki the Cava-lon amin'ny maha alika azy amin'ny 8 herinandro
Alika kely 10-herinandro Cava-lon maka hatory
Alika kely Cava-lon 10 herinandro miala sasatra
Alika kely Cava-lon 10 herinandro mipetraka eo ambony sezalava
Alika kely Cava-lon 10 herinandro nihaona tamin'ny tompony
frantsay bulldog boston terrier afangaro alika kely
rat terrier afangaro amin'ny jack Russell
sary iray Malta alika